Yintoni uyilo lwegraphic: yintoni na kunye nemisebenzi ephambili yoyilo | Abadali be-Intanethi
Umthombo: Isikolo soShishino saseMelika
Khawufane ucinge okomzuzwana ukuba ushwankathelo lweprojekthi yakho luqala kwisiseko soyilo lophawu apho kuya kufuneka uyile indawo nganye yesibini (ubugcisa bokubhala, imvelaphi yefoto, imidiya ye-intanethi kunye ne-intanethi kunye nebhrendi, njl.njl.)
Ukongeza kuloo nto, kufuneka kwakhona ubeke ikhathalogu encinci okanye incwadi yesazisi ebonisa uphuhliso lophawu. Kwaye ukuba ibhrendi oyiyileyo ifanelekile kumaphepha ewebhu, kufuneka kwakhona uyilungelelanise ukuze ihambelane ngokugqibeleleyo nefomathi yewebhu oyiyileyo. Ekuqaleni, yonke into esikuxelela yona isenokungaziwa ngokupheleleyo kuwe, kulungile, yonke into esiyikhankanyileyo yinxalenye yoyilo lwegraphic.
Yiyo loo nto kule posi sikuzisa impendulo yombuzo wakho "Uyilo lwantoni? kwaye njengoko singafuni kukulinda ixesha elide, siya kukucacisela ngezantsi.
1 Uyilo lwegraphic
1.1 Imisebenzi ephambili
1.2 umyili olungileyo
2 Uyilo lwantoni?
3 Iintlobo zoyilo
3.1 Uyilo lomhleli
3.2 Uyilo lwewebhu okanye oluphathwayo
3.3 ifoto kunye nemifanekiso
3.4 Uyilo lokupakisha okanye ukupakisha
Uyilo lomzobo luyindawo yobugcisa begraphic, kwaye ichazwa njengoqeqesho olunoxanduva lokudala, usebenzisa ielementi zegraphic (iimilo zejiyometri, iifonti, uluhlu lwemibala, njl.njl.) yothotho lweeprojekthi ezivelisa into esiyaziyo njengentengiso.
Kutheni intengiso yaziswa kakhulu kuyilo? Lo mbuzo uqhelekile ukubuza ukuba asikayiqondi imisebenzi ephambili yoyilo. Yiyo loo nto uyilo lwegraphic lujikeleza kakhulu. ukuyilwa kunye noyilo lweendaba zentengiso ezibangela ukunyuselwa okanye ukuthengiswa kwezi.
Ngamanye amazwi, uyilo lomzobo luya kuhlala luzama ukuyila ezo projekthi zifuna isicwangciso sokuthengisa kwaye zijolise ekufikeleleni kubaphulaphuli abathile. Ngenxa yesi sizathu, intengiso yenye yeengcambu ezenza uyilo, ekubeni zihamba kunye kwaye enye ayiyi kuba yinto ngaphandle komnye.
Uyilo luzalisekisa uluhlu lwemisebenzi ukuphumeza, ngale ndlela, iinjongo ezicwangcisiweyo:
Uyilo lweGraphic lunesigaba sokuqala sophando, ngaphambi kokuyila kuyimfuneko ukuphanda. Ibalulekile ukwazi kuqala ukuba yintoni kwaye njani kwaye ngaphezu kwabo bonke ngubani. Le yimibuzo emifutshane ekufuneka wonke umyili azibuze yona phambi kwengcaciso emfutshane okanye iprojekthi nomxumi othile. Ingcaciso esikwaziyo ukuyibamba iya kusinceda kuzo zonke iinkqubo eziza kamva.
Ikwanalo nothotho lwezimvo ezilawula ukwenza izinto zegraphic okanye into esiyaziyo njengemizobo emincinci okanye imizobo. Ezi ngcinga zisebenza ukuba zilahlwe okanye zikhethwe, kuxhomekeke ekubeni yeyiphi eyona ifanele iprojekthi esiza kuyenza.
Uyilo lukwamalunga nokunxibelelana kunye nokunxibelelana ngento esiyiyileyo. Oko kukuthi, akayenzi ngokuvakalayo kodwa uthetha nabanye ngolwimi lwemifanekiso. Ke ngoko ukubaluleka kwebrendi yamkelwa ngabasebenzisi kunye nohlengahlengiso kumaxabiso enkampani kunye nentengiso.
I-Psychology nayo iyadlala, njengoko isisiseko semigaqo yoyilo ngalunye. Kwintengiso yaziwa ngokuba uyilo lokucinga kwaye sisiseko sokuqinisekisa ukuba yonke into esiyiyileyo iyafezeka kwaye yamkelwe.
Ukuza kuthi ga ngoku sichazile ukuba yintoni uyilo, kodwa usenokungayazi into ekufuneka abe nayo umyili olungileyo ukuze afezekise iinjongo esizikhankanyileyo. Yiloo nto ingengabo bonke abantu abanobuchule bokuyila yaye asingabo bonke abenziwe ukuba benze yonk’ into.
Into yokuqala umyili Kufuneka ube nakho ukuyila kunye nengqondo evulekileyo oko kukuvumela ukuba uqhube kwaye ulungele nayiphi na iprojekthi eza ngendlela yakho. Yingakho kufuneka ikwazi ukuguqula i-breafing elula kwiprojekthi ehambelana ngokupheleleyo neengcamango ezicetyiswa ngumxhasi.
Yintoni enye ekumele ube nayo ngokuqinisekileyo ngumlinganiswa, kufuneka unikeze umlinganiswa kunye nobuntu obunzulu kunye nobuchwephesha kwinto oyenzayo. Musa ukubhidanisa ubuntu kunye nethoni yonxibelelwano. Ithoni yindlela apho i-brand okanye into esiyiyileyo iya kujongana noluntu, ubuntu yiyo yonke into umyili oya kufuneka aqhube ngayo iiprojekthi.
Umntu osebenzayo oneenjongo okanye iinjongo ngokuqinisekileyo ukwangumntu obalulekileyo kwindima yomyili. Yingakho kufuneka ube neenjongo ezicwangcisiweyo kwaye uhlangabezane nazo, ngaphandle koko awuyi kukwazi ukusebenzisa i-100% kwinto oyenzayo ukususela ekubeni uyilo lusekwe ekubeni luqeqesho apho iinjongo ezithile eziphambili zihamba phambili.
Uyilo luhambelana noluhlu lweempawu ezenza ukuba luhlobo lobuchule obusebenzayo, kuba yonke into eyiliweyo inesizathu sokuba kutheni kwaye yintoni.
Uyilo luyasinceda ukuba sibe ngokwethu, kwiprojekthi nganye esiyiqhubayo kuhlala kukho uphawu okanye umzobo wobuqu osichonga njengabaqulunqi, yiyo loo nto xa sithetha ngoyilo sithetha nangesazisi.
Ikwanceda unxibelelwano, njengoko besesitshilo ngaphambili, sisebenzisa ulwimi olusinceda sinxibelelane nendlela yethu yokusebenza kunye noyilo lwethu. Ndiyabulela kule nto, abantu abaninzi ngakumbi baphefumlelwe ngolunye uyilo kwaye ngale ndlela balawula ukudala uhlobo lolwimi lwendalo yonke.
Iinkampani ezininzi zikwazile ukuzuza impumelelo kwimarike ngokubulela kwisicwangciso esilungileyo sokuthengisa. Yiyo loo nto uyilo lwegraphic kwakhona izikhundla kunye noncedo kubantu abaninzi kwibala leshishini ukwenza uphawu lwabo lwaziwe.
Ukuyila ikwenza ube ngumntu ozimeleyo, kwaye akuthethi ukuba usebenza kuphela kuwe, kodwa kunoko kukwenza ube ngumntu oneengcambu ezizimeleyo, okwaziyo ukusebenza yedwa okanye kwinkampani kunye nokufezekisa iinjongo ezicwangcisiweyo.
Ujongana nazo zonke izinto ezikhoyo zegraphic, uqhelana nazo kwaye uyazi ukuba uzibeke njani ngokomxholo ngamnye, yile nto siyibiza ngokuba yi-hierarchy ebonakalayo. Ukongeza, awudibanisi kuphela nendlela yokubeka izinto kodwa ngengqondo yomntu ngamnye.
Umthombo: Imigca eBlue
Siyaqonda ukuba uyilo lomzobo lolosapho lobugcisa begraphic, kodwa asikwazi ukucacisa ezinye zeentsapho ezingaphantsi okanye iintlobo ezikhoyo. Yiyo loo nto, ngezantsi, siza kukubonisa iintlobo zoyilo lwegraphic ezikhoyo, ukuze ngale ndlela uvule ingqondo yakho kwaye uzivumele ukuba ukhokelwe yileyo ifaneleka kakhulu iimpawu zakho kunye nezinto ezithandayo.
Uyilo lomhleli yeyosapho loyilo lweekhathalogu neemagazini. Sesinye sezigaba ezinokuthi zibe ngokugqibeleleyo kwiprojekthi yesazisi sophawu, umzekelo, ukuphuhliswa kwencwadana yesazisi kunokuba yenye yezinto eziyilwe kule nxalenye yeprojekthi.
Ngokuphathelele iimpawu zayo, kugxininiswe ukuba umyili ngeli nqanaba uyaziqhelanisa neefonti, kwaye afunde ukuzikhetha. Ukongeza, ikwaphuhlisa ulawulo lokubhaliweyo kwaye isebenzisa izixhobo ezinje ngeprofayile zemibala kunye neenkqubo zoshicilelo.
Ngamafutshane, asiyiyo yonke into esekwe ekuyileni iincwadi okanye amaqweqwe emagazini, kodwa kuyafuneka ukuba uphengulule kwisakhelo esibalulekileyo soyilo ukuze ukwazi ukucacisa ngokuchanekileyo uyilo.
Uyilo lwewebhu okanye oluphathwayo
Uyilo lwewebhu okanye oluphathwayo yeyona ndawo isebenzisanayo yoyilo lwegraphic. Inoxanduva lokuphuhlisa imidiya yentengiso ye-intanethi kwaye inceda ukubethelela ukubaluleka kophawu. Ikwasesinye sezigaba ezinokuthi zibe kwiprojekthi yesazisi, ngakumbi ukuba uphawu esiluyilwayo lucwangciswe kumaphepha ewebhu.
Ngeli nqanaba, umyili ulungiselela imilinganiselo yeendaba ukuba ziyilwe (iibhana, izithuba, umfanekiso weprofayili, njl.)
ifoto kunye nemifanekiso
Xa uthi krwada nje zingamazwe amabini ahluke ngokupheleleyo, kodwa ukuba sijonga ipowusta yentengiso (into ebalulekileyo yoyilo lomzobo) umfanekiso okanye umfanekiso awunakuphoswa ukuba uhambe nawo.
Zombini zihamba kunye, kwaye oku akuthethi ukuba umntu ozinikele ekuyileni kufuneka akwazi ukuzoba okanye ukufota, ngokulula. imele ithathele ingqalelo iimpawu ezibalulekileyo zezinye zazo.
Uyilo lokupakisha okanye ukupakisha
Apha kulapho konke ukupakishwa kwemveliso yakho enegama kungena esenzweni. Nje ukuba siyile i-brand, kuya kufuneka ukuba silungiselele ukupakishwa ukuba imveliso eza kuthengiswa yeyomzimba.
Yiyo loo nto apha umyili okanye umyili kufuneka uthathele ingqalelo imiba yokusebenza kwemveliso yakho kunye nesikhongozeli: imathiriyeli, imilinganiselo, imizobo yokongeza, njl.
Uyilo lwesazisi lubandakanya yonke into enento yokwenza nokuphuhlisa uphawu ukusuka ekuqaleni okanye njengenxalenye yoyilo ngokutsha. Sesinye sezigaba apho owona msebenzi mkhulu wenziwayo kuba yonke into ithathelwa ingqalelo ukuze uphawu olwenzileyo lwaziwe.
Kolu hlobo loyilo, zonke izinto ezibiziweyo zegraphic kufuneka zithathelwe ingqalelo, ngokunjalo Yiba nolwazi lokuthengisa kunye neentengiso.
Uyilo lusisiseko sayo yonke into esingqongileyo, kangangokuba ibe yindlela entsha yokunxibelelana nomyalezo. Siyathemba ukuba ufunde ngakumbi malunga noyilo kwaye ngakumbi ukuba uyayiqonda indima ebalulekileyo eyidlalayo kuthi njengoluntu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Yintoni uyilo lwegraphic?